Wiseplay inogadziridzwa ichiwedzera kunatsiridza kwakakosha | IPhone nhau
Kana zvasvika pakutarisa terevhizheni pane iyo iPhone kana paIpad, isu tine chaizvo zvisarudzo zvishoma zviripo kana tisina iwo mapeji ewebhu emapuratifomu akasiyana eterevhizheni chero bedzi kodzero dzenhepfenyuro dzichikubvumidza kuti uzviparadzire pamusoro pewebhu, nekuti zvirokwazvo pane kanopfuura kamwechete poster inofadza yakaonekwa kuti kodzero dzechirongwa chakadai kana firimu hazvibvumidze kubereka kwaro kuburikidza newebsite. Pa Android pane huwandu hukuru hwezvishandiso zviripo zvekuona yeruzhinji uye yakabhadharwa nzira (zvine musoro kunze kweGoogle Play), zvakadaro, paIOS, nekuda kwekukanganisa kweApp Store, zvinoita zvisingaite, kunze kwekunge tikashandisa kubva iyo Wiseplay kunyorera.
Wiseplay mune application iyo inotibvumidza isu kuti titambe vhidhiyo zvemukati kuburikidza nekushambadzira Chero bedzi tiine zvinowirirana zvinongedzo, nekuti iko kunyorera kusingatipe isu chero natively, saka inogona kupfuudza mafirita eApp Store. Kuti ukwanise kunakidzwa nenzira dzeruzhinji uye dzakabhadharwa, iwe unofanirwa kutsvaga paInternet kutsvaga .m3u uye .w3u zvinyorwa zvinotibvumidza kuti tizviwedzere kuchishandiso kuitira kuti tinakidzwe neterevhizheni chero kwatinoda.
Wiseplay achangogamuchira nyowani nyowani kuwedzera maficha nyowani nekuvandudza kuita kwese kushanda, chishandiso chinotipa kushambadzira, chinowanikwa kurodha mahara, kushambadza kwatinogona kubvisa kana tikashandisa iyo ye-in-app kutenga iyo ine mutengo we3,99 euros.
Chii chitsva muWiseplay 2.1.0
Iyo yekufambisa skrini yakagadziridzwa.
Sarudzo yakawedzerwa iyo inotibvumidza isu kuvandudza kutaridzika kwevhidhiyo.
Iyo kodhi yeapp yakagadziridzwa uye yakagadziridzwa.
Nguva dzese runyorwa rwatakawedzera rwuchivandudzwa isu tinogamuchira yekuvandudza.
Kunze kweiyo w3u uye m3u zvinyorwa zvakagadziridzwa zvakare.
Rutsigiro rutsva rweVR mavhidhiyo.
Tsigiro yemavhidhiyo matsva anomiririra.
Iyo yakabatanidzwa web browser yakagadziridzwa.
Madudu madiki akaonekwa mushanduro dzakapfuura akagadziriswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Wiseplay inogadziridzwa ichiwedzera kunatsiridza kwakakosha